Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Itoobiya & ciidamadii Eritrea oo isaga baxay magaalooyin muhiim ah.
June 30, 2021 Xuseen 8
Puntlandtimes (Makalele)-Jabhadda dagaalada hubaysan ka wadda qaybo kamid ah waqooyiga Itoobiya ee TPLF ayaa wali sii wada dhul ballaarsi kadib markii ay dib ula wareegeen caasimada gobolka ee Mekelle oo ay kala wareegeen ciidamada dowlada.
Mucaaradka ayaa hadda galay magaalada Shire, oo qiyaastii 140km (90 mayl) u jirta waqooyi-galbeed, sida ay sheegeen saraakiisha Qaramada Midoobay, waxaa dhankooda ciidamadii dowladda Eritrea ee taageersanaa ciidanka Itoobiya ay ka bexeen magaaladaasi.
Dhanka kalena, dowladda wadanka Itoobiya ayaa gobolka Tigray uga dhawaaqday xabbad joojin – siddeed bilood kaddib markii uu Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu halkaas ciidamo u diray si uu hoggaanka gobolkaas meesha uga saaro.
Warka ka soo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu imaanaya xilli dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in ciidammada ka soo horjeeda dowladda ay joogaan waddooyinka caasimadda gobolkaasi ee Mekelle
Kkkkkkk farmaajo, saaxiibkiis abiy ma u tacsiyeeyay, abiy wali ma walaal ayaan nahay mise tigreeda ayaan walaalo nahay su, aashaas markale farmaajo hannooga jawaabo kkkkkkkkk
yaab¡!!!! maxaa farmaajo keenay???? wax kale oo la sheego ayaa la waayey!!!
Dameero Tiro Badan says:
Hawiyei yo Oromo waa dadka kaliyata weli lagu gumeysto Geeska Afrika.
Hawiye dameer waaye Farmaajo fuushanyahay.
Oromo dameer waaye Abiy fuushanyahay.
MARYOOLEY amaad daihiina ku mashquultaan!! ETHIOPIA inay is-cuntay dantiina ku jirtaa intay idinka idin cuni lahayd…
OMG — YAA ILAAHEEEEEEEEEEEEEEEEEE..
Wariye, xagee warka ka soo tebisaa.. Aad iyo aad baad warkaago u dambeeyaa.. Ciidamada ERITERIA ee aad sheegayso, waxaa jidgooyo loogu sameeyey magaalada la yiraahdo RAAMA ee ku dhacda xaduudka ERITERIA iyo TIGRAAY. Hadda waxaa uu dagaalku ka socda, meel xaduudka u jirta 17 ilaa 18 km ee gudaha ERITERIA.
Ciidamada TIGRAAY, waxeey baacsanayaan ciidamadii ERITIERIA, waliba ciidamada ERITERIA oo qaawan, oo hubkii lagala hadhay, dharkii lagala hadhay. Iyaga oo qaawan aa la baacsanayaa..
Midda kale, hal ciidan oo ETHIOPIA ama ERITERIA ma joogaan gudaha TIGRAAY… Hadda waa saacaddan aan qoraayo qoraalkaan.
Abiy Ahmed ha iska hadlo, ha qayliyo, ha yiraahdo xabad aan joojiyey, TIGRAAY warkoodu waa cad yahay…
1. waa in aay xoreestaan dhammaan dhulka TIGRAAY.
2. Ammaanka TIGRAAY waa in ay xaqiijiyaan.
3. Waa in ay martiqaadaan dhamaan caalamka oo ay tusaan wixii ay sameeyeen ciidamadii ERITERIA iyo ETHIOPIA iyo AMXAARADII.
4. Waa in ay martiqaadaan dhamaan shacabkii TIGRAAY oo qaxay.
Intaas ka bacde, waa in ay dejiyaan qorshe (strategy) oo ku hawl galaan oo kaga aargoostaan Abiy Axmed iyo Maleeshaayinkee AMXAARADA.
Ogsoonaada, hadii maantay la yiraahdo, TIGRAAY kaalaya oo xukunka qabsada, TIGRAAY ku qanci meeyso. Waa in ay u dhigaan cashar lama hilmaan ah oo ay ku dhuftaan AMXAARADA.
Waxaa taas ka sii daran, dhamaan ciidamda OROMADA diyaar beey u yiheen in ay soo raacaan TIGRAAY oo la jebiyo gebirka AMXAARADA..
Haddi aanu SOOMAALI WEYN nahay, waxaan leenahay isku jabba oo isdila, oo waxba ha iska reebinina..
Kooxaha ku riyoonaya TIGRAI awooda ETHIOPIA dib u qabsada kama duwana caruurtii dhalanteedka biyaha moodi jiray, waxay dadka kufali jireen baa lagu falay, waana in qolo waliba xaafadeeda xidhataa ugu dambayn…
Horta garan maayo in dhidig tahay ama lab… Hase yeeshee ixtiraam baad mudan tahay, wax kasta ahow.
Mid ogsoonoow, abiy Axmed iyo AMXAARO TIGRAAY, waa dhigo ku yaal hal dameer. Kuligood, waxba kuuma aha.. Waa cadow Soomaaliyeed.. Waxaase ugu xun kan hadda jooga ee Abiy Axmed. Abiy Axmed in aad jirto iyo in kale warba kuuma hayo…
Abiy Axmed wuxuu u haaystaa in uu isagu ku leeyahay.. Halkaasna waxaa gaarsiiyey labo nin oo daciifiin ah oo kala ah MUSTAFA CAGJAR iyo XAAR FARMAAJO.
Marka la eego AMXAARO, waxeey isu haaystaan in waddanka ETHIOPIA oo dhan iyago leeyiheen… OROMADA, SOOMAALIDA, CANFARTA dhamaantood waxaa ILAAH u abuuray in ay u shaqeeyaan oo adoonsadaan.
Dhamaan kuwaas, waxaa ugu roonaa TIGRAAY… TIGRAAY waa is-dilaysaan… Waa ku dilaya. Adna waa dilaysaa… Laakeen wuxuu kuu ogol yahay in aad noolaato se qof bani-aadmi ah.
Xukunka hoose ee SOMAALIDO haaysato TIGRAAY baa siisay… dhulna kama qaadan…
Maantay, orod tag JIGJIGA, walaahi AMXAARO baa qaadatay… Bal ka warrama ninka AMXAARADA ah, oo yiri waxaan dunduminayaa taalada SAYID MOXAMED CABDULLA XASAN… Hadda waa OGAADEEEN oo wada taagan.
Hadii AMXAARO sidaa ku see socoto, waddanka KILINKA SHANAAD iyaga ayaa qabsanayaa.. SOMAALIDO waxeey noqonaysaa in ay AMXAARADA u shaqeeyaan..
WAR OGAADEEENOOOW, ma been baan sheegayaaa??
Wiil majeerteen so-called barawani
Adeer baroortaada waa la soconaa tigreega heshiiskaad kula jirtay, xasuuqa onlf iyo Somali oo idil buu ahaa, waxaad MOGADISHU ka samayseen waad la socotaa, sayidkana warkiisa daaba oo talyaanigaad biyaha u sideen,
Aduunyada ninkii dhuuman lahaa baa ugu qaylo dheer, jigjiga iyo somali galbeed oo idil ONLF iyo Somali oo idili iyadoo xoray dhex mushaaxdaa,
Ka waran Ragaad ka gadeen TIGRAI??
Hakuu taalo tacsida tigreegu..